M ga-esi ihe nanị site log na
mkpa M ga-esi ihe nanị site log na
1 afọ 11 ọnwa gara aga #516 by JanneAir15
Nnọọ! M hụrụ na mgbe m kere a isiokwu (dị ka nke a) m na-adịghị na-10 ihe nke bụ ihe ị ga-mgbe na-eke a isiokwu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ahụ dị ka ikenye ikwu ma ọ bụ na-aza na ihe karịrị 150 odide a post. M zitere a tiketi na mkpara ma m ga-achọ ịjụ site kwa na ebe a. Otú ahụ nwere ike ị biko nyere m aka?
1 afọ 11 ọnwa gara aga #540 by Colonelwing
Yeah m na-achọpụta na oke ,, na French forum saịtị na-enye ihe ...
Ma eleghị anya, ihe na-adịghị arụ ọrụ nri na software mecanic.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #561 by Gh0stRider203
M Aga banyere nke a na bosses
1 afọ 11 ọnwa gara aga #563 by Dariussssss
Iji n'ụzọ zuru okè eziokwu, m na-adịghị ọbụna na-achọpụta na ... na nke ahụ bụ otú ihe dị m mkpa. M bịara ebe a ga-esi ụfọdụ ndị kasị mma ụgbọ elu maka FSX gburugburu na ebe a na Forum, na aka na nsogbu ma nweta nnọọ ọṅụ na a dị ịtụnanya obodo, nke n'ezie na-amụba, dị ka ụbọchị ọ bụla .... bụghị na-anakọta ụfọdụ ihe .. .
BTW, ihe bụ ojiji nke isi ihe ndị?
1 afọ 11 ọnwa gara aga #564 by Gh0stRider203
Ọ BỤRỤ na ị na-aga ruo aha gị, na mgbe ahụ Goto My Points ị ga-ahụ nke a na ihuenyo na-abịa elu ..
Anakọta ihe iji nweta free Jumbo ndebanye aha.
Jumbo 1 ọnwa ndenye aha = 1 000 pts, 3 ọnwa = 2 000 pts, 6 ọnwa = 3 500 pts, 12 ọnwa = 5 500 pts
1 afọ 10 ọnwa gara aga #611 by Kyrelel
Ọ ga-adị na logon ihe agaghịkwa eme, na "My Points" nhọrọ e wepụrụ - ugbu a, anyị na-akwụ ụgwọ maka Jumbo? M nwere (m na-eche) fọrọ nke nta 2500 ihe.
1 afọ 9 ọnwa gara aga #656 by Rolando
Ọ ga-adị mma na-enweta ihe ọmụma banyere nke a!
1 afọ 9 ọnwa gara aga #657 by Gh0stRider203
Rolando dere, sị: Ọ ga-adị mma na-enweta ihe ọmụma banyere nke a!
Na-amaghị ihe na-agwa ya, ma. O doro anya na anyị na-adịghịzi ihe na-eme stof na ebe a. M nnọọ ka na ọchịchịrị dị ka ị bụ.
1 afọ 9 ọnwa gara aga #658 by rikoooo
M na-nkwarụ ihe usoro n'ihi na anyị nwere ukwuu oru nsogbu na ya, Otú ọ dị, na futur anyị pụrụ iji ya ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-enweta na-agba ịnyịnya nke chinchi.
Ọ bụrụ na ị nwere karịa 1000 ihe ị ka nwere ike na-ajụ m a free Jumbo ndenye aha, ya mere, gị isi na-egbughị.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
1 afọ 9 ọnwa gara aga #659 by Gh0stRider203
M ga-ama ma eleghị anya nso na sị na ọ bụghị malfunctioning akpa ọchị